I-Object Direct-Pronouns in Spanish
Intloko-ngqo kunye nezinto ezichaziweyo-intetho ezihlukeneyo ngeSpanish
NgeSpanish njengesiNgesi, into echanekileyo yibizo okanye isigamagama esenziwa ngokuthe ngqo ngesenzi .
Ukwahlukahlukana ngeSpanish, nangona kunjalo, ukuba isakhelo sezibhengezo ezinokuthi izinto ezichanekileyo zihluke kancinane kwizinto ezinokuthi zichaze izinto . Kwisivakalisi esifana nesithi "Ndiyabona uSam," "uSam" into ecacileyo "yabona" ​​kuba "uSam" nguye obonakalayo. Kodwa kwisigwebo esithi "Ndibhalela uSam incwadi," "Sam" yinto engekho ngqo.
Into ebhaliweyo "yileta," ngoko yinto ecacileyo. "Sam" yinto engangqaliyo njengomntu ochaphazelekayo ngesenzo sesenzi kwizinto ezichanekileyo. Ukwahlula kwenziwa phakathi kweentlobo ezimbini zeempawu zesikhulu ngesiSpanish kodwa kungekhona ngesiNgesi.
I-8-Object Pronouns yeSpanish
Nazi izibhengezo zezinto ezichanekileyo kunye neenguqu eziqhelekileyo zesiNgesi kunye nemizekelo yokusetyenziswa kwazo:
mna- uJuan ungiqinisekisile. (UYohane unokundibona.)
u - wena (unolwazi oluqhelekileyo) - Awukho udibanisa. (Akakwazi wena .)
khangela- wena (kunye nomntu osisigxina), yena-ke -Ayikho into ekhoyo . (Andikwazi ukukubona, okanye andinakuyibona, okanye andiyikubona.)
u- wena (wesinye isistim esisemthethweni), yena, -Ayikho into eyenziwa ngayo . (Andikwazi ukukubona, okanye andinakuyibona, okanye andinakuyibona.)
nos - us - Nos conocen. (Bayazi.)
os - wena (ubuninzi besazi ) - Os ayudaré. (Ndiya kukunceda.)
i-los - you (ubuninzi beemveli, abafana okanye abaxubekileyo besilisa kunye nabesifazane), bona (abantu besilisa okanye abaxubekileyo besilisa nabesifazane) - Los oigo. (Ndiva, okanye ndiva.)
i-las - wena (ubuninzi besimo esisetyhini), bona (besetyhini) - Las oigo. (Ndiva, okanye ndiva.)
Qaphela ukuba lo , la , los and las ingabhekisela kubantu okanye izinto. Ukuba bebhekiselele kwizinto, sebenzisa isini esifanayo kunye negama lento ekubhekiswa kuyo. Umzekelo: Tengo dos boletos. ¿Ukulahleka?
(Ndineetikiti ezimbini. Ngaba uyazifuna?) Kodwa, iTengo dos rosas. ¿Las quieres? (Ndineerusi ezimbini. Ngaba ufuna zona?)
UkuLwa kweLizwi kunye neeNkcazelo eziLawuliweyo
Njengoko unokubona kwimimiselo engentla, indawo yesikhombisi-into esichazelayo iyahluka. Kwiimeko ezininzi, kunokufakwa phambi kwesenzi. Ngenye indlela, inokuqhotyoshelweyo kwi-engapheliyo (uhlobo lwesenzi esiphelela kwi-- ar , -er okanye -ir ) okanye inxaxheba kwisabelo (ifom yesenzi esiphelela--ndo , kaninzi isilingana nesenzi sesiNgesi iphele "-a"). Isivakalisi ngasinye kwezi zibini zilandelayo zibonisa intsingiselo efanayo: Awukho loedo ver , kwaye akukho nomeo verlo (andinakuyibona). Te estoy ayudando , kunye neseyudándote ( Ndikunceda ). Qaphela ukuba xa into ethe ngqo yongezwa kwintetho ethatha inxaxheba, kubalulekile ukongeza ukuvakalisa okubhaliweyo ukwenzela ukuba uxinzelelo lube kwi-syllable efanelekileyo.
Izibhengezo zezinto ezizenzekelayo zilandela imilayezo yokuqinisekisa (ukuxelela umntu ukuba enze into ethile) kodwa ulandele imilayezo engeyiyo (etshela umntu ukuba angenzi nto): estúdialo ( yifunde ), kodwa akukho mvavanyo ( ungayifundeli ). Qaphela kwakhona ukuba ukugqama kufuneka kudibaniswe xa ukongeza into ekupheleni kwemithetho emihle.
Le njengeNjongo ngqo
Kwezinye iindawo zaseSpain, le nto inokuthi ithathe indawo esikhundleni saloo nto xa ithetha "kuye" kodwa kungekhona "yona." Ngokuqhelekanga kwiindawo ezithile, i - substitut i-substitution ye los xa ibhekisela kubantu.
Unokufunda okungakumbi malunga nale nzekayo kwisifundo kwi- leísmo .
Isampula Izivakalisi Ukubonisa Ukusetyenziswa Kwezinto Ezizodwa
Izinto ezicacileyo ziboniswa ngesibindi:
Mna interesa i-comprar yee, pero más tarde. (Ndiyomdla ekuthengeni, kodwa kamva kuninzi. Mna kwesi sivakalisi yinto engekho ngqo.)
Yonke into enomxholo we-intanethi yi-intanethi. (Impumlo yakho ikhwebile ngenxa yokuba umama wakho wayiqhekeza xa usengumfana . La isetyenziswe apha kuba ibhekisela kwi- nanz , eyowesifazane .)
Iimpawu ze-episodio 14. Siyazibona kwi-episodio 14. (Usenokusibona kwiNgqungquthela 14. Zizibini zezi zivakalisi zithetha into efanayo, njengoko into echanekileyo ingakwazi ukuza phambi kwezenzi okanye iqhotyoshelweyo ezingapheliyo. ) U
Techoero mucho. (Ndiyakuthanda kakhulu.)
Iilwimi ezingalandelwa yiGerund
Njalo kumabini amabini ukuya ku: Iimpazamo eziqhelekileyo zesiNgesi
Iifom ezigqibeleleyo - ezilula okanye eziqhubekayo?
Indlela yokudibanisa "Éteindre" (ukucima, ukucima)
Indlela yokunikezela ngcebiso kunye nelizwi elithi "Ngaba kufanelekile"
INdlu yaseMontague e-'Room and Juliet '
I-Europop ihamba ngesiLatin: iHermer Alpert kunye neTijuana Brass